Ụdị Onyinye Chineke Chọrọ Ka A Na-eweta n’Ụlọ Nsọ Ya; Alo Ndị E Nwere n’Oge Baịbụl | Ị̀ Maara?
GỤỌ NKE Afrikaans Albanian Amharic Arabic Armenian Aymara Bulgarian Catalan Cebuano Chichewa Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chitonga Chitumbuka Cibemba Croatian Czech Danish Dutch Efik English Estonian Ewe Finnish French Ga Georgian German Greek Guarani Haitian Creole Hebrew Hiligaynon Hungarian Igbo Iloko Indonesian Italian Japanese Kazakh Kikaonde Kikuyu Kinyarwanda Kirghiz Kirundi Kongo Korean Latvian Lingala Lithuanian Luganda Luo Macedonian Malagasy Maltese Maya Myanmar Nepali Ngabere Norwegian Nyaneka Nzema Otetela Papiamento (Aruba) Papiamento (Curaçao) Polish Portuguese Quechua (Bolivia) Rarotongan Romanian Russian Sango Sepedi Serbian Serbian (Roman) Sesotho (Lesotho) Setswana Shona Silozi Sinhala Slovak Slovenian Spanish Sranantongo Swahili Swedish Tagalog Tatar Thai Tigrinya Tshiluba Tsonga Turkish Tuvaluan Twi Tzotzil Ukrainian Umbundu Uzbek Vietnamese Xhosa Yoruba Zulu
Gịnị ka alo a kọrọ akụkọ ya na Baịbụl bụ?
A na-esi n’osisi Agawud enweta alo
Baịbụl kwuru na e ji alo eme ka uwe na ihe ndina na-esi ísì ọma. (Abụ Ọma 45:8; Ilu 7:17; Abụ Sọlọmọn 4:14) Ọ ga-abụ na a na-esi n’osisi a na-akpọ agawud enweta alo ndị ahụ. Ọ na-abụ osisi a bido ire ure, ọ na-agbapụta mmanụ na esó na-esi ísì ọma. A na-egweri osisi ahụ nke ọma, ya adị ka nzụ, e resịwezie ya ndị mmadụ. Ọ bụ osisi ahụ e gweriri nke ọma bụ “alo.”
Baịbụl kwuru na ụlọikwuu ụmụ Izrel yiri “ahịhịa alo nke Jehova kụrụ.” (Ọnụ Ọgụgụ 24:5, 6) O nwere ike ịbụ otú osisi agawud na-adị mere Baịbụl ji kwuo ihe a. Osisi ahụ na-etopụ etopụ. Ogo ya nwere ike iru mita iri atọ, akwụkwọ ya na-agbasakwa agbasa. Ọ bụ eziokwu na e nwekwaghị osisi a ugbu a n’Izrel, ma otu akwụkwọ nke na-akọwa okwu ndị dị na Baịbụl kwuru na “e nweghị ihe mere a ga-eji ekwu na osisi a na osisi ndị ọzọ ndị mmadụ na-amaghị ugbu a adịghị na ndagwurugwu Jọdan n’oge ahụ.”
Olee ụdị onyinye Chineke chọrọ ka ndị mmadụ na-eweta n’ụlọ nsọ ya dị na Jeruselem?
A hụrụ ihe a e ji ájá kpụọ n’ụlọ nsọ dị na Jeruselem. o ruola ihe dị ka puku afọ abụọ
Chineke nyere ụmụ Izrel iwu na onyinye niile ha ga-eweta n’ụlọ nsọ ya kwesịrị ịbụ ndị kacha mma. Chineke achọghị onyinye rụrụ arụ, ọ chọghịkwa ka ha jiri anụmanụ nwere nkwarụ chụọrọ ya àjà. (Ọpụpụ 23:19; Levitikọs 22:21-24) Otu onye Juu aha ya bụ Faịlo, onye dere akwụkwọ n’ihe dị ka puku afọ abụọ gara aga, kwuru na n’oge ahụ, ndị nchụàjà na-enyocha anụmanụ niile, ‘si n’isi ruo n’ọdụ,’ iji hụ na anụmanụ a ga-eji chụọ àjà enweghị “ntụpọ ma ọ bụ nkwarụ ọ bụla.”
Otu ọkachamara aha ya bụ E. P. Sanders kwuru na o nwere ike ịbụ na ndị na-arụ ọrụ n’ụlọ nsọ “nyere ndị a tụkwasịrị obi na-ere anụmanụ n’ụlọ nsọ iwu ka ha na-ere naanị anụmanụ na nnụnụ ndị nchụàjà nyocharala ma chọpụta na ha enweghị nkwarụ. Ebe ọ dị otú a, ndị na-ere anụmanụ na-enye ndị zụrụ anụmanụ ihe dị ka risit iji gosi na anụmanụ ha resịrị ha enweghị nkwarụ.”
N’afọ 2011, ndị na-amụ banyere ihe ndị mgbe ochie hụrụ ụdị risit ahụ. Ha hụrụ ya n’akụkụ ụlọ nsọ dị na Jeruselem. E ji ájá kpụọ ya. Ọ hà ka mkpụrụ ego, e dekwara ya ihe n’elu. Ọ bụ n’ihe dị ka puku afọ abụọ gara aga ka a kpụrụ ya. Ihe a sụgharịrị mkpụrụ okwu Arameik abụọ e dere n’elu ya bụ: ‘Onyinye A Dị Ọcha Ka E Nye Ya Chineke.’ A sịrị na ọ ga-abụ na ndị na-arụ ọrụ n’ụlọ nsọ na-ewere risit ahụ konye n’ihe ndị dị ka achịcha, ọka ma ọ bụ anụmanụ a chọrọ iji chụọ àjà.
Ị̀ Maara?—Febụwarị 2014